Isiokwu nke Madhavi Vaidya Martech Zone |
Edemede site na Madhavi Vaidya
Gated ọdịnaya bụ atụmatụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-eji nyefee ọdịnaya dị mma na nke bara uru iji nweta ezigbo ndu na mgbanwe. Enweghi ike ịnweta ọdịnaya gbara ọsọ ma ọ nwere ike ịnweta ya mgbe ịgbanwere ụfọdụ ozi dị mkpa. 80% nke akụ ahịa ahịa B2B nwere ọnụ ụzọ; dị ka ọnụ ụzọ gated bụ ihe atumatu nye ụlọ ọrụ ọgbọ B2B. Hubspot Ọ dị mkpa ịmata mkpa nke ọdịnaya nwere ihu ụzọ ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ B2B na ndị dị otú ahụ
Abụọ kachasị dị irè maka B2B Lead Generation
Họrọ ọmịiko ndị ahịa na ahụmịhe ndị ahịa dịka ihe dị mkpa nke atụmatụ gị yana ị nwere ike ịchọtalarị mpempe akwụkwọ na-efu efu nke nwere ike mezue ndu ndu ndu egwuregwu ugbu a!